पाँचथर हत्याकाण्ड : सम्बन्ध विच्छेदको निहुँमा दुई परिवार सखाप – RealPati.com
Wednesday, 24, February, 2021
पाँचथर हत्याकाण्ड : सम्बन्ध विच्छेदको निहुँमा दुई परिवार सखाप
काठमाडौं, श्रीमती मनकुमारी शेर्मासँग सम्बन्धविच्छेद गर्नुपरेको बदलामा पाँचथरको मिक्लाजुङ–७ लिम्बाका मानबहादुर माखिमले ससुराली र साढु दाइका दुई परिवारका सबै सदस्यको हत्या गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । सम्बन्धविच्छेदको निहुँमा पाँचथरको मिक्लाजुङ–३ आरुबोटेका बमबहादुर फियाक र धनराज शेर्माको परिवारका नौ जनाको गत राति वीभत्स हत्या भएको प्रहरीले स्थलगत अध्ययनपछि जनाएको होे । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरका प्रहरी निरीक्षक अनिलकुमार पौडेलले सङ्घीय प्रहरी एकाइ धरानको टोलीसमेतको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट माखिमले नौ जनाकै हत्या गरेको देखिएको बताउनुभयो । गत राति फियाक र शेर्माको घरमा रहेका नौ जनाको वीभत्स हत्या भएको थियो ।
स्थानीयका अनुसार फियाक र शेर्माका परिवार आर्थिकरुपमा निम्न स्तरको रहेकाले परिवारका सदस्यहरुको रिसइबीका कारणले मात्रै घटना भएको हुनसक्ने स्थानीयको भनाइ छ । स्थानीय शिक्षक गणेशप्रसाद लुइँटेलले भन्नुभयो, “आफ्नो मेसो गर्ने यो निर्धो परिवारमाथि अरु कसले किन हमला गर्छ ? हामी अरुले आक्रमण गर्ने कुरा सोच्नसमेत सक्दैनौँ ।” लुइँटेलका अनुसार मृतक शेर्माले आफ्नो साढु भाइ (सालीको श्रीमान्)बाट आफूहरुमा मनमुटाव रहेको बताएका थिए । “हामी असुरक्षित हुनसक्छौँ भनेर धनराजले मलाई हिजो मात्रै भनेका थिए”, लुइँटेलले भन्नुभयो “आज यस्तो आपत आइ लाग्यो ।”
सम्बन्धविच्छेदले उब्जाएको द्वन्द्व
बमबहादुर फियाककी कान्छी छोरी मनकुमारीको पाँच वर्षअघि मानबहादुर माखिमसँग राजीखुशी विवाह भएको थियो । उनीहरुबाट जुम्लाहा बच्चा भए पनि शिशु अवस्थामै मरेका थिए । यसपछि मनकुमार माइतीमै बस्न थालिन् । मनकुमारीले मानबहादुर आफूसँग सम्बन्धविच्छेद गर्न दबाब दिँदै आएकी थिइन् ।
मृतक मनकुमारीका जेठा भिनाजु रणबहादुर लिम्बूले भन्नुभयो, “सालीले सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहने, साढु भाइले नमान्ने । यही कारण द्वन्द्व उब्जिएको थियो ।” वडाध्यक्ष हस्तराज फियाकका अनुसार उनीहरुबीच हालैमात्र सम्बन्धबिच्छेदको प्रक्रिया अघि बढेको थियो । “मानबहादुरले सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहेको थिएनन् तर पनि उनी केही साताअघि सम्बन्धविच्छेदका लागि तयार भएका थिए”, वडाध्यक्ष फियाकले भन्नुभयो, “यो अकल्पनीय घटना सम्बन्धविच्छेद स्वीकारोक्तिको परिणाम हो । हाम्रो सिङ्गो गाउँ आँशुमा डुबेको छ ।” वडाध्यक्ष फियाकका अनुसार मानबहादुर तीन वर्षदेखि माइतीमा रहेकी श्रीमतीसँग सम्बन्धविच्छेद गर्न नमान्नुको कारण आश्चर्यजनक छ । “यता नआए पनि एकोहोरो भएका छन् भन्ने सुनेका थियौँ”, वडाध्यक्ष फियाकले भन्नुभयो, “पछिल्लो पटक उनी लुकिछिपी यहाँ हिँड्ने गरेको सुनिएको थियो ।”
आत्महत्याले दिएको संकेत
पाँचथर प्रहरीका अनुसार मानबहादुर माखिम आफ्नो घरभन्दा करीब डेढ किलोमिटर तल मलेदोको रुखमा झुण्डिएको अवस्थामा आज दिउँसो फेला परेका थिए । उनको साथबाट रगत पोतिएको खुकुरी, केही कपडा र झोला फेला परेको थियो । उनको शव फेला परेपछि नौ जनाको सामूहिक हत्यामा मानबहादुरको संलग्नता रहेको पुष्टि भएको प्रहरी निरीक्षक पौडेलको भनाइ छ । “तर, उसले एक्लै सबैमाथि खुकुरी हान्यो वा उसलाई सघाउने कोही थियो, त्यो खुल्न बाँकी छ”, पौडेलले भन्नुभयो, “अनुसन्धानबाट यो कुरासमेत खुल्ला ।”
नुनमा सिसाको टुक्रा हालेर मार्ने प्रयास
अघिल्लो आइतबार धनराज शेर्माको भान्साघरको नुनमा सिसाका टुक्रा मिसिएको पाइएको थियो । यस क्रममा धनराजका दुई छोरीसहित केही स्थानीय महिला घाइते भएका थिए । लघु उद्यम प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत धनराजको श्रीमती जस्मिता शेर्मा प्रशिक्षक थइन् । उनैले आफ्नो घरमा नास्ता बनाई प्रशिक्षार्थीलाई खुवाउथिइन् । शिक्षक लुइँटेलका अनुसार सिसाका टुक्रा भेटिएको कुरालाई धनराजले प्रहरीसम्म पु¥याएनन् । बिरामीहरु हालैमात्र फिदिमस्थित समर्पित अस्पतालमा उपचार गरी फर्किएका थिए । “सिसाका टुक्रा लगाएर धनराजको पूरै परिवार मार्ने योजना थियो कसैको”, स्थानीय हरेन्द्र फियाकले भन्नुभयो, “त्यो सम्भव नभएपछि सामूहिक हत्या भएको हुनसक्छ ।”
एकान्तमा घर, कसैले जानकारी पाएन
धनराजको घरमा जस्मिताको उपचारका लागि धामी राखिएको थियो । धामीलाई धनराजले आफ्नै घरमा बस्ने जिद्दी गरे पनि धामीले मानेनन् । एकान्तमा रहेका दुवै घरमा एक–एक जनामात्रै पुरुष सदस्य थिए । धनराजको घरभन्दा माथि वडा कार्यालय तथा एउटा घर छ तर धनराजको कच्ची घर तल्लोपट्टि फर्किएका कारण घटना स्थानीयले राति जानकारीसमेत पाएनन् । बमबहादुरको घरको छेउमा दुई वटा घर रहे पनि एउटामा एक वृद्ध महिला र अर्कोमा एक युवतीमात्रै बस्दथे । प्रहरी अनुसन्धानले पनि एकान्तको मौकामा सबैमाथि खुकुरी प्रहार भएको देखाएको प्रहरी निरीक्षक पौडेलले उल्लेख गर्नुभयो ।
वीभत्स हत्याले शोकमग्न गाउँ
बमबहादुरसहित उनकी श्रीमती फुर्चीमाया फियाक, कान्छी छोरी मनकुमार फियाक (माखिम) र बमबहादुरकी साइली छोरीकी छोरी आसिका खजुम, बमबहादुरको घरमा हत्या भएको थियो । यस्तै बमबहादुरका जेठा ज्वाइँ धनराजसहित उनकी श्रीमती अस्मिता फियाक (शेर्मा), उनीहरुका दुई छोरी युहाना र मुना शेर्मा तथा धनराजका भाइकी छोरी इक्सा शेर्माको धनराजको घरमा वीभत्स हत्या भएको थियो । घटनामा आशिकाकी दिदी सीता भने भागेर बाँच्न सफल भएकी छन् । उनको झापामा उपचार भइरहेको छ । हत्यापछि सिङ्गो गाउँपालिका शोकमा डुबेको छ । घटनास्थलमा गाउँ–गाउँबाट सयौँको सङ्ख्यामा स्थानीयवासी भेला भएका थिए । “हामीले सोच्नसमेत सकेका छैनौँ यहाँ के भइरहेको छ भनेर”, मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका उपप्रमुख उर्मिला राईले भन्नुभयो, “यो घटनाको जति निन्दा गरे पनि पुग्दैन् ।” शोकमग्न स्थानीय भावुक र त्रसित देखिन्थे । बमबहादुरको घर वरिपरि सयौँको भीड लागेको थियो ।
काठमाडौं न्युरो तथा जनरल अस्पतालद्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, ४ सय लाभान्वित
शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन मेरो सचिवमा उम्मेदवारी – छविन्द्र ओझा
गायिका सुनिमा लो र गायक नरहरी प्रेमीको ‘फेसबुक’(भिडियोसहित)
दशैंमा लगाउने जमराको जूस खाँदा हुन्छ स्वास्थ्यलाई यति धेरै फाईदा
अमेरिकामा छक्का पन्जा – ३ ले बनायो नयाँ रेकर्ड
लिपुलेकमा स्थापना गरियो सशस्त्र प्रहरी पोष्ट (फोटोफिचर)
झण्डै ७० प्रतिशत मत ल्याएर फेकनमा जितेकी दीपाले अब के गर्लिन् ?
तिवारीद्धारा वडा कार्यालय भवनलाई जग्गा प्रदान
फेकनलाई राम्रो बनाउन इन्द्रजित गौतमका यस्ता छन् योजना
म महासचिव भएपछि फेकनको स्वरुप नै बदलिन्छ – राजु निरौला
भरतपुर आँखा अस्पताललाई पाकिस्तानको सहयोग
सांसद दवाडीले आफूले लगाएको ज्याकेट नै फुकालेर किन लाइदिए ? 828 views
कन्सल्टेन्सी व्यवसायीको हितको लागि विशेष योजना ल्याउने छु – विपिन केसी 325 views
मूल्यवृद्धि फिर्ता नलिएसम्म हाम्रो आन्दोलन रोकिँदैन –नेता बस्नेत 134 views
फेकनलाई राम्रो बनाउन इन्द्रजित गौतमका यस्ता छन् योजना 90 views
नेकपा अब इतिहासमा मात्र सीमित हुन्छ – कांग्रेस नेता न्यौपाने